२ वर्ष अघि सुटुक्क परिवार नियोजन गरेका श्रीमानलाई श्रीमतीले ‘म गर्भवती भएँ ‘ भनेपछि…. – Jagaran Nepal
श्रीमानले दुई वर्ष अघि नै परिवार नियोजन गरिसकेका थिए । तर उनको श्रीमतीले श्रीमानलाई गर्भवती भएको खबर सुनाइन् । श्रीमतीले श्रीमान खुसी होलान् भनेर खबर सुनाएकी थिइन् । तर उनको त्यो खबरले श्रीमान भने झस्किए । श्रीमानले दुई वर्ष अघि भ्या’से’क्टोमी गराइसकेका थिए ।
तर, मैले २ वर्षअघि भ्या’सेक्टोमी गराएको थिएँ । यो बच्चा मेरै हुने कति सम्भावना छ ? के उनको अरु कोही त्यो बच्चाको बुवा हुनसक्छ ? धेरै समयदेखि हामी एकसाथ बसिरहेका छौं र हामी धेरै राम्रोसँग संवाद गर्छौं । मलाई विश्वास लाग्दैन कि उनले मलाई धो’का दि इन् होला । तर, ब’न्ध्याकरणपछि मलाई यकिनका साथ थाहा छैन कि ग’र्भव’ती हुने कति सम्भावना छ । ’उनले अनलाइनमा यस विषयमा मिश्रित रि’भ्यु पाएको बताउँदै अहिले आफूले टु’क्रिएको महसुस गरिरहेकोले सहयोग गर्न भनेका छन् । उनको पोस्टले ११ सयभन्दा धेरै भोट पाएको छ र सयौंले उनलाई सल्लाह दिएका छन् ।
धेरैजसोले उनलाई पत्नीमाथि आरोप लगाउनुभन्दा पहिले आफ्नो स्प’र्म काउ’न्टको जाँच गराउन भनेका छन् । उनलाई डाक्टरहरुले पनि सल्लाह दिएका छन् । केहीले प्र’तिक्रिया दिँदै आफूले यसअघि पनि पुरुष स्थायी ब’न्ध्या’क’र’ण वि’फल भएका व्यक्तिहरु देखेको बताएका छन् । एक युजरले लेखेका छन् ‘म एक डाक्टर हुँ ।
मेरा एक बिरामी थिए जसकी पत्नी पतिको ब’न्ध्या’क’र’णपछि पनि ग’र्भव’ती भएकी थिइन् । यो निकै दुर्लभ हो तर असम्भव होइन ।’ अर्का एक युजरले कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले डाक्टरकहाँ गएर परीक्षण गराउन भनेका छन् । एक युजरले डिएनए परीक्षण गर्न भनेका छन् ।